Air Astana dia mandefa sidina mivantana mankany Maldives
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Air Astana dia mandefa sidina mivantana mankany Maldives
Air Astana dia hanomboka hiasa any Maldives indroa isan-kerinandro, amin'ny Alarobia sy Sabotsy manomboka ny 5 Desambra, ary amin'ny Alatsinainy hatramin'ny 21 Desambra 2020.
Ny sidina dia hiasan'ny fiaramanidina Airbus A321LR manara-penitra izay namboarina miaraka amin'ny seza kilasy 16 sy seza kilasy Economy 150. Ireo seza kilasy fandraharahana lainga dia misy efijery fialamboly 16-inch tsirairay, miaraka amin'ny seza efatra amin'ny 16 manome toerana manokana. Amin'ny kilasy toekarena, ny seza Recaro dia manome fampiononana bebe kokoa ho an'ny sidina lava ary miaraka amin'ny efijery 10-inch an'ny tsirairay.
Noho ny filàna be mandritra ny fialan-tsasatry ny vanim-potoana, manomboka ny 16 des ka hatramin'ny 16 jan 2020, ny sidina Boeing 767 miserana no manome ny sidina, manome seza fanampiny azo hipetrahana.
Amin'ny Alarobia sy Sabotsy, ny sidina dia hiala amin'ny Almaty amin'ny 01.20 ora eo an-toerana ary tonga any Male amin'ny 07.05 ora eo an-toerana, ny sidina Alatsinainy dia hiala amin'i Almaty amin'ny 01.30 ora eo an-toerana ary tonga any Male amin'ny 07.15 ora eo an-toerana. Serivisy miverina avy amin'ny lahy miainga amin'ny 19.35 ary tonga ao Almaty ny andro manaraka amin'ny 03.10 ora eto an-toerana.
Ny saran-dàlana dia manomboka amin'ny 677 dolara amerikana amin'ny kilasy toekarena ary manomboka amin'ny US $ 2067 amin'ny kilasy fandraharahana, ao anatin'izany ny haba sy ny haba. Ny vidiny dia miankina amin'ny fiovaovan'ny tahan'ny fifanakalozana amin'ny andro famoahana ny tapakila.
Aorian'ny fampiharana an-tserasera dia mivoaka maimaim-poana ny visa fidirana amin'ny fahatongavany ao amin'ny seranam-piaramanidina ary manan-kery mandritra ny 30 andro hatramin'ny andro nandraisana azy.
Ny fepetra takiana amin'ny Repoblikan'i Maldives dia misy ny taratasy fanamarinana PCR Test amin'ny teny anglisy miaraka amin'ny valiny ratsy. Ny taratasy fanamarinana dia tokony ho manan-kery mandritra ny 96 ora manomboka amin'ny fotoana anaovana ny fanadinana mandra-pahatongan'ny ora fahatongavan'ny sidina. Ireo zaza latsaky ny 12 volana dia afaka amin'ity fitsapana ity.
Ny mpandeha koa dia takiana mba hamenoana fanambarana ara-pahasalamana ara-pahasalamana tsy maintsy atao, 24 ora alohan'ny hahatongavany any amin'ny toerana halehany. Amin'ny endrika fanambarana dia mila mampakatra ny sarin'izy ireo ny mpandeha (hatramin'ny 2 megabytes), ary koa ny fitsapana PCR misy valiny ratsy. Ireo mpandeha tonga any Kazakhstan avy any amin'ny firenena vahiny dia tokony hanana taratasy fanamarinana fanandramana PCR ratsy (tsy tokony hihoatra ny 3 andro no handalo hatramin'ny andro namoahana ny valim-panontaniana mandra-pahatongan'ny fotoana hiampitana ny sisintanin'ny Repoblikan'i Kazakhstan), raha tsy izany dia azo sorohana izy ireo fiondranana.
Qatar Airways dia nanambara ny fiaramanidina FIFA Qatar 2022 voalohany namboarina
Ny praiminisitra Maorisy dia mangataka ny fizarana vaksiny COVID-19 amin'ny sehatra iraisam-pirenena